Maayirka Magaalada Burco Oo Shaaciyay Goobaha Beri Laga Fulin Doono Olalaha Nadafadeed[Faahfahin] | 18 May News
Maayirka Magaalada Burco Oo Shaaciyay Goobaha Beri Laga Fulin Doono Olalaha Nadafadeed[Faahfahin]
July 14, 2021 - Written by admin
“Sida ay diinteenna suubbani inagu amartay, nadaafaddu waa qayb ka mid ah iimaanka qofka. Olalaha nadaafaddu wakhti ma yeesho ee qof kasta waa ku waajib goor kasta iyo goor kasta.
Berri ololaha aynu doonayo inaynu qaadno waa mid aannu rejaynayno inuu boqdo mid habaysan. Waxa laga shaqayn foonaa 8 goobood oo kala durugsan. Sababta aannu u badinnay goobuhu waa inaannu dadku meel isugu wada tegin, qashinka iyo dadkana aannaan isugu fasixin, annaga oo wasakh nadiifinaynana aannaan xanuun idiin horseedin.
Goobaha laga hawlgeli doonaa waa
6-Xabaalaha waddada Cadawyurura
7-Dugsiga sare ee Cabdalla Nuuri
8-Biyamareenka dheer ee Samawada
Waxa kale oo aannu hawlgelinnay dhammaan guddiyada xaafadaha iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka. Waxaannu ku heshiinnay inay xaafad waliba 50 qoys oo abaabulani si wadajir ah uga shaqeeyan xaafadahooda. Annaga oo kaashanayna wasaaradda Waxbarashada, waxa aannu ka codsannay inay dugsiyada faraan in mid waliba ka shaqeeyo dugsiiisa iyo xafaadaha la jaarka ah.
Siddeed tallaabo ayaa noo qorshaysnaa inaannu qaadna Isniin ilaa Khamiis. Sariibadaha, hangarka, goobaha caafimaadka, hudheellada cuntada, warshadaha iyo goobaha qashinqubka ayaannu hawlgallo nadaafadeed ka fulinnay. Khamiista oo qudha kuma koobnaan doonto shaqadayadu ee ilaa magaalo nadif ah la helo nasan mayno.
Qofka ugu wanaagsan ee ka qaybgeli kara ololahi waa qofka gurigiisa ka qaada dhagaxaanta, garanwaaga ka jara, qashinka wajahaddana gura. Waxa isaguna ololahan qayb laxaad leh ka qaada kara qofka meherad haysta ee qashingur (Dustbin) hortiisa dhiga gurigiisana geeya.
Mahad aan duugoobin iyo abaal weyn ayaannu u haynaa buslahda reer Burco iyo gaar ahaan ururradii iyo shirkadihii deeqaha kala duwan na soo gaadhsiiyey. Waxa iyaguna mudnaan gaar ah naga leh bahda farshaxanka Burco oo quruxda waddooyinka muujiyey. Waa inoo berri iyo maalin bilicsan. Mudnaan
Maamulka Gobolka Sanaag Oo Magg Ukala Wareejiyay Laba Beelood Oo Walaalo Ah Oo Dega Degmada Ceelafwayn[Muuqaal]
Alle Hawnaxariistee Waxa Aas Qaran Loo Sameeyay Taliyihii Ciidanka Booliska Degmada Garadag[Muuqaal]
Wax ka ogow qalab cusub oo loo isticmaalo arimaha basaasinimada oo hal xidhaale ku noqday madax badan oo caalamka(turjumidii aqoonyahan Xuseen Deyr)
Madaxweynaha JSL Oo Cafis Ufidiyay Maxaabiista Danbiyada Fudfud Ku Xukaman Ee Kuxidhan Xabsiyada Dalka[Faahfaahin]
Gudoomiyaha Gudida Qandaraasyada Qaranka Somaliland Oo Dhanbaal Hanbalyaa Udiray Shacabka Somaliland Munaasibada Ciidal Adxa Awgeed
Copyright © 2021 18 May News ®All rights reserved.